Tombontsoa 5 amin'ny fividianana Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
Cofttek dia orinasa matihanina efa eo an-tsena hatramin'ny 2012 ary fantatra amin'ny vokatra avo lenta. Ny zavatra tsara indrindra momba an'io fanampin dia ny hoe tsy misy gluten ary tsy misy allergen iraisana. Noho izany, ny olona mora tohina amin'ny karazan-tselatra samihafa dia afaka mandray ity fanampin-tsakafo ity nefa tsy very ny fiadanany. ny fanampiana Cofttek PQQ dia iray amin'ireo tsara indrindra Pyrroloquinoline Quinone fanampin-tsakafo misy ankehitriny eny an-tsena. Raha mitady safidy tsy mihinan-kena ianao, dia ampirisihinay hividy ny fanampin-tsakafo PQQ Energy avy Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone disodium sira FAQ
Inona ny Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Pyrroloquinoline Quinone na PQQ dia tamboho iray izay misy ao anaty zavamaniry ary koa ny bakteria maro sy ny eukaryota sela, toy ny masirasira. Ny PQQ koa dia misy fitrandrahana ao anaty rononon'olombelona ary koa ny soja feta, kiwi, papaya, spinach, persily, oolong, paiso maitso ary dite maitso. Ny fikarohana natao momba ny biby dia nampifandray ny tsy fahampian'ny PQQ na ny tsy fahampiana PQQ miaraka amin'ny valin-kery fanefitra marim-pototra, ny fahantrana amin'ny fitomboana, ny fanaovan-jaza tsy manara-dalàna ary ny fanalefahana metabolika mampihena.
Nandritra ny taona maro, nieritreritra ireo mpikaroka fa Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) dia karazana vitamina. Na izany aza, ny fikarohana natao tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nanambara fa ny Pyrroloquinoline Quinone dia otrikaina misy kalitao mitovy amin'ny vitamina izay manana ny fahaizana miasa ho toy ny co-factor na ny enzim-booster amin'ny fizotran'ny fihenan'ny-oksiôida izay mampisy ny fifindran'ny elektrôna eo anelanelan'ny roa karazana Amin'ny teny tsotra, ny PQQ dia mamatotra ny tenany amin'ny quinoproteins eo amin'ny vatana ary miara-miasa amin'izy ireo mba hialana amin'ireo radikaly afaka. Ny fikarohana natao dia nahitana quinoproteins 100 heny mahomby noho ny Vitamina - C amin'ny maha anti-oxidant azy. Ny fandalinana vao haingana dia nanambara ihany koa fa ny PQQ dia misy fiantraikany amin'ny famindrana angovo sy ny metabolisma sela amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny totalin'ny mitochondria ao anatin'ny vatana. Ireo zava-misy lehibe ireo no nahatonga fiakarana tampoka teo amin'ny lazan'ny quinone Pyrroloquinoline tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Inona no ataon'ny quinone pyrroloquinoline?
Ankoatry ny maha-zava-maniry ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny cofactor bakteria, ny pyrroloquinoline quinone (PQQ) dia miaro ny mitochondria amin'ny tsindrona oksidatif ary mampiroborobo ny mitochondriogenesis.
Ohatrinona ny PQQ tokony raisinao isan'andro?
Hatreto dia tsy misy fetra ambony na ambany kokoa izay naorina Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) fatra Na izany aza, ny valiny notsongaina tamin'ny fanadihadiana momba ny biby dia nanambara fa io fitambarana io dia lasa bioaktifa rehefa nidina fatra ambany hatramin'ny 2 mg. Na izany aza, ny ankabeazan'ny famenon-tsakafo amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny 20 mg ka hatramin'ny 40 mg, izay heverina ho faritra azo antoka. Ny PQQ dia misy amin'ny kapsula matetika, izay anoroana hevitra ny olona handray vavony foana. Na izany aza, ampandrenesina ny mpampiasa mba tsy hihoatra ny fatra 80 mg isan'andro.
Rahoviana aho no tokony handray CoQ10 maraina na alina?
Marihina fa ny fakana CoQ10 akaiky ny fotoana fatoriana dia mety hiteraka tsy fahitan-tory amin'ny olona sasany, ka tsara kokoa raha raisina maraina na tolakandro (41). Ny fanampin-tsakafo CoQ10 dia afaka mifampiraharaha amin'ny fanafody mahazatra sasany, ao anatin'izany ny fanalefahana ra, antidepressants ary ny fitsaboana simika
Inona no hijoroan'ny Q ao amin'ny CoQ10?
Coenzyme Q10 (CoQ10) dia antioxidant iray vokarin'ny vatanao voajanahary. Mampiasa CoQ10 ny selao amin'ny fitomboana sy fikojakojana.
Ahoana no hamelomana indray ny mitochondria?
Ho setrin'ny fanentanana, ny mitochondria dia mandalo tsingerina fusion / fission mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana. Lojika araka izany ny fiheverana fa ny plastika amin'ny dinamika mitochondrial dia takiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny neuronal.
Manana quinine ao aminy ve ny CoQ10?
Coenzyme Q10 dia an'ny fiankinan-doha antsoina hoe ubiquinones izay mifandraika amin'ny kininina simika. Raha azonao antoka fa tsy mahazaka quinine ianao dia tokony hiresaka amin'ny dokotera alohan'ny hanombohana famenon-tsakafo isan'andro amin'ny CoQ10.
Fa maninona no nesorin'izy ireo ny kininina teny an-tsena?
Ny US Food and Drugs Administration (FDA) dia nandidy ny fanesorana ireo vokatra rongony tsy nankatoavina izay misy kininina, mitanisa ireo ahiahy mafy momba ny fiarovana sy ny fahafatesan'ny fampiasana azy ireo. Ny hetsika dia ampahany amin'ny ezaka lehibe kokoa hanesorana ireo fanafody tsy azo antoka sy tsy ekena rehetra eny an-tsena.
Inona ny endrika coenzyme Q10 tsara indrindra?
Ubiquinol dia mitentina 90% amin'ny CoQ10 ao anaty ra ary io no endrika azo zahana. Noho izany, nanolorana azy ho isafidianana ny fanampin-tsakafo misy ny endrika ubiquinol
Inona no ataon'ny Co Q 10 amin'ny vatana?
Ny CoQ10 dia naseho fa manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny fo sy ny fifehezana ny siramamy amin'ny rà, manampy amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny homamiadana ary mampihena ny fahaizan'ny migraines. Izy io koa dia afaka mampihena ny fahasimban'ny oxidative izay mitarika ho amin'ny havizanana, fahasimban'ny hoditra ary aretin-tsaina sy havokavoka.
Miampita ny sakana amin'ny ati-doha ve ny PQQ?
Abstract. Pyrroloquinoline quinone (PQQ), raha tsy izany dia fantatra amin'ny hoe methoxatin, dia orthoquinone mety levona amin'ny rano, redox-bisikileta izay natokana tamin'ny kolontsain'ny bakteria methylotropic. … Hita fa amin'ny biby iray manontolo dia tsy miampita ny sakana amin'ny ati-doha ny PQQ.
Maninona Isika no Mila Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Rehefa mihantitra ny olona dia lasa voatery miady amin'ny loharanon'ny fahasimbana marobe ny ati-dohany. Na dia misy loharanom-pahavoazana sasany aza tsy misy fiantraikany kely amin'ny ati-dohan'olombelona, ​​ny fahasimbana sasany dia lasa antony iray amin'ny aretina neurodegenerative sy ratra miandalana izay misy fiantraikany amin'ny lalan-dra. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanjary niahiahy bebe kokoa momba ny fahasalaman'ny ati-doha ny olona, ​​noho izany, ny fikarohana, ary koa ny fahatsiarovan-tena momba ny fiasan'ny ati-doha sy ny fahasalamana, dia nihamafy tokoa. Ireo mpikaroka dia manao fikarohana tsy tapaka mba handinihana sy hamakafaka ny vokatry ny zavatra simika sy ny fitambarana isan-karazany amin'ny fahasalaman'ny ati-dohan'olombelona. Ny kompana iray toy izany izay nanetsika ny fahalianan'ny mpikaroka sy ny mpahay siansa eran'izao tontolo izao dia Pyrroloquinoline Quinone (PQQ). Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba izay rehetra tokony ho fantatra momba ny Pyrroloquinoline Quinone, ao anatin'izany ny asany, ny tombony, ny fetran'ny fatrany ary ny voka-dratsiny. Vakio hatrany.
Mampihena ny fihanaky ny poizina. Omeo otrikaina miaro ny mitochondria amin'ny fihenjanana amin'ny oxidative.
Mampiasà otrikaina izay manamora ny famokarana ATP mitochondrial.
Afaka mampitombo mitochondria ve ianao?
Ny fampihetseham-batana no fomba tsara indrindra hampitomboana ny fihinanana oksizena, manakiana ny tsingerin'ny Krebs mitochondria. Rehefa mampiasa angovo bebe kokoa ny vatanao dia hanery ny tenany hamokatra mitochondria bebe kokoa haharaka ny fangatahana.
Quinine PQQ ve?
Ny quinine Pyrroloquinoline, fantatra koa amin'ny anarana hoe PQQ, dia cofactor redox ary fitambarana polyphenolic izay matetika hita amin'ny zavamaniry sakafo. Izy io dia hita ao amin'ny cytoplasm an'ny sela ary manampy amin'ny fihenan'ny fihenan-tsakafo sy ny okididra.
Inona no kininina hita voajanahary ao?
Ny kininina dia fitambarana mangidy izay avy amin'ny hoditr'ilay hazo cinchona. Ny hazo dia matetika hita any Amerika atsimo, Amerika afovoany, ny nosy Karaiba, ary ny ampahany amin'ny morontsiraka andrefan'i Afrika. Ny kininina dia novolavolaina ho fanafody hiadiana amin'ny tazomoka.
Inona no dikan'ny Pyrroloquinoline Quinone disodium salt (PQQ)?
Ny fanontaniam-panontaniana mialoha ny mari-pahaizana (PQQ, izay antsoina indraindray hoe fangatahana fanombanana mpamatsy) dia mametraka andiana fanontaniana ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo mety hamaly momba ny fari-piainany, ny fahaizany ary ny toerany ara-bola.
Inona no mahasamihafa ny coQ10 sy ubiquinol?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) dia fitambaran'ny quinone tsy voavahan-drano izay manana fahaiza-manao anti-oxidant mahery. Ny fandinihana taloha momba ny voalavo dia namahana sakafo tsy lanin'ny PQQ dia naneho fa ny fihenan'ny serum triglyceride (TG) avo lenta dia nihena taorian'ny famenon'ny PQQ.
Milamina ve ny PQQ?
Ny fikarohana natao hatreto dia nanamafy fa ny PQQ dia zakan'ny vatana tsara rehefa alaina ao anatin'ny fetra voatondro. Na izany aza, ny fihoaran'ny dosie voatondro dia mety mitarika amin'ny lafin-javatra, toy ny aretin'andoha, harerahana ary rendremana. Araka izany, nanoro hevitra ireo mpampiasa mba hifikitra amin'ny fatra azo antoka 40 mg isan'andro isan'andro ary tsy mihoatra ny fatra 80 mg. Ny tena zava-dehibe kokoa, na dia fantatra aza fa mahay mandanjalanja ny vatana ny PQQ, dia tsara kokoa raha manatona dokotera alohan'ny hanombohana ny fampidirana azy raha toa ka misy fepetra preexisting.
Tsara kokoa noho ny CoQ10 ve ny PQQ?
CoQ10 dia toy ny supercharger manatsara ny hafainganan'ny fiaran-dalamby. Ny PQQ dia toy ny orinasa mpanao trano izay miasa foana manampy fiara fanampiny amin'ny fiarandalambinao. Raha fintinina, ny CoQ10 dia manatsara ny hafainganan'ny fiaran-dalamby famokarana angovo, raha ny PQQ kosa dia manampy sy manangana fahaiza-manao fanampiny amin'ny fiarandalambinao.
Ohatrinona ny CoQ10 tokony horaisiko?
Tsy misy fatra idealin'ny CoQ10. Ny fandalinana dia nampiasa fatra amin'ny CoQ10 manomboka amin'ny 50 milligrams ka hatramin'ny 1,200 milligrams amin'ny olon-dehibe, indraindray mizara ho dosie maromaro ao anatin'ny iray andro. Ny fatra mahazatra isan'andro dia 100 milligrams hatramin'ny 200 milligrams.
Miteraka fivontosan'ny rà ve ny CoQ10?
Anticoagulants. Ny CoQ10 dia mety hahatonga ny fanafody manalefaka ra, toy ny warfarin (Jantoven), tsy dia mandaitra loatra. Izany dia mety hampitombo ny risika amin'ny fivontosan'ny rà.
Fa maninona no lafo be ny Q10?
Rehefa, avy eo, ny Q10 mivoaka avy amin'ny ra mankamin'ny sela ary mankamin'ny sela, dia avadika ho endrika miovaova amin'ny bio, ubiquinone. Ny endrika ubiquinol an'ny Q10 dia tena tsy milamina ary, vokatr'izany, lafo kokoa ho an'ny mpanamboatra kapsily Q10 hiara-miasa.
Mandra-pahoviana ny CoQ10 no miasa?
Rehefa manomboka miverina amin'ny laoniny ny tahan'ny Ubiquinol, tokony ho hitan'ny olona maro ny fihenan'ny reraka amin'ny andro fahadimy aorian'ny fanombohana ny fanampiana. Matetika ao anatin'ny roa ka hatramin'ny telo herinandro, ny habetsaky ny Ubiquinol amin'ny vatanao dia hahatratra ny haavon'ny optimum, ary maro no hahatsapa fahasamihafana amin'ny angovo ao anatin'ity fotoana ity.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny fihinanana CoQ10?
Ny famenon-tsakafo CoQ10 dia toa azo antoka ary tsy mamokatra vokatra hafa rehefa raisina araka ny torolalana.
Ny voka-dratsin'ny fahalemena dia mety misy olana amin'ny fandevonan-kanina toy ny:
Ny fanaintainan'ny kibo ambony
Ny voka-dratsy hafa mety hitranga dia mety misy:
Aretin'andoha sy fanina
Mangidihidy hoditra na mihosin-koditra
Tezitra na tezitra
Ny fiarovana ny fampiasana CoQ10 mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fampinonoana dia tsy napetraka. Aza mampiasa CoQ10 raha bevohoka ianao na mampinono nefa tsy mahazo alalana amin'ny dokoteranao.
Mitovy amin'ny quinine ve ny quinone pyrroloquinoline?
Ny quinine Pyrroloquinoline, fantatra koa amin'ny anarana hoe PQQ, dia cofactor redox ary fitambarana polyphenolic izay matetika hita amin'ny zavamaniry sakafo. Ny PQQ dia azo laniana ho famenon-tsakafo hanampiana ny famokarana angovo sela sy ny fahasalaman'ny mitochondrial ary hiarovana ny vatana amin'ny fihenjanana ataon'ny oxidative.
Tsara amin'ny fo ve ny PQQ?
Ny PQQ mahavelona mahery vaika dia afaka misoroka ny tsy fahombiazan'ny fo. Ny fikarohana ara-pitsaboana vaovao, navoaka tao amin'ny fanontana farany ny Diagnosis & Therapy Cardiovascular, dia namintina fa ny otrikaina tena ilaina Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) dia afaka mandray anjara amin'ny fisorohana ny tsy fahombiazan'ny fo mitohy (CHF).
Azonao atao ve ny mandray PQQ mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny valiny dia manondro fa ny famenon-tsakafo miaraka amin'ny PQQ, indrindra mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fampinonoana, dia miaro ny zaza amin'ny fandaharam-pivoarana ateraky ny WD amin'ny lipotoxicity hepatic ary mety hampihena ny valanaretina NAFLD amin'ny taranaka manaraka.
Azo antoka ve ny PQQ ho an'ny diabetika?
Ireo vokatra manohitra diabeta an'ny PQQ ireo dia notohanan'ny fananana antioxidative, satria ny PQQ dia tsy vitan'ny hoe nanakana ny sela LPO fa nanatsara ny insuline serum sy HDL, ary koa ireo antioxidantan'ny sela.
Ahoana no hanomezanao hery mitochondria?
Fomba 10 hanatsarana ny Mitochondria anao
Mihinana kaloria kely kokoa.
Makà fanampin-tsakafo PQQ.
Atsipazo karbaona voadio toy ny soda, mofo fotsy ary mofomamy.
Mihinana proteinina manara-penitra toy ny hen'omby omena ahitra sy atody notezaina ahitra
Ataovy lohalaharana ny torimaso 8 ora isan'alina.
Ahenao ny fihenjanana amin'ny teknika fanalefahana toy ny fisaintsainana na fanorana isan'andro.
Andramo fitsaboana hafanana.
Makà hetsika 30 minitra farafahakeliny isan'andro.
Mihinàna sakafo manankarena antioxidant miaraka amin'ny resveratrol toy ny sôkôla mainty.
Mihinàna loharanon'ny omega-3 sy asidra alpha-lipoika.
Inona no atao hoe antioxidant PQQ?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) dia cofactor redox vaovao hita tao amin'ny rononon'olombelona. PQQ dia antioxidant mahomby miaro mitochondria amin'ny peroididida lipid-stress vokatry ny adin-tsaina, ny fananganana karbonika ary ny tsy fampiatoana ny rojo mitochondrial respiratory.
Inona ny vitamina PQQ?
PQQ dia fitambarana voajanahary hita amin'ny sakafo isan-karazany. Miasa ho toy ny antioxidant ary manohana fiasa mitochondrial mahasalama. Noraisina ho toy ny fanampiana ho fampiroboroboana ny fiasan'ny ati-doha.
Inona ny PQQ 20?
Pyrroloquinoline quinone na PQQ dia fitambarana toy ny vitamina izay hita matetika amin'ny sakafon'ny zavamaniry. Io no nahitana azy voalohany ho cofactor ho an'ny bakteria izay mitovy amin'ny fiantraikan'ny Vitamina B amin'ny olombelona. Ny PQQ dia manana fihetsiketsehana anti-otrikaina sy otrikaina B, miaraka amin'ny tombony maro be ho an'ny ati-doha sy vatana.
Inona avy ireo sakafo misy PQQ?
Mety mihinana PQQ kely isan'andro ianao. Izy io dia hita amin'ny vola kely amin'ny sakafo maro toy ny epinara, dipoavatra maitso, kiwifruit, tofu, natto (soja soavaly), dite maitso ary ronono olombelona. Na izany aza, amin'ny ankapobeny tsy mahazo PQQ betsaka amin'ny sakafo isika - tombana ho 0.1 ka hatramin'ny 1.0 miligramy (mg) isan'andro fotsiny.
Inona avy ireo sakafo mampitombo mitochondria?
Ny sasany amin'ireto otrikaina manan-danja ireto dia misy ny L-carnitine sy ny creatine, izay samy ilaina amin'ny famatsiana angovo amin'ny mitochondria. Afaka mahazo be dia be ianao amin'ny fampidirana henan'omby, bison, atody, akoho amam-borona, tsaramaso, voanjo ary voa amin'ny sakafonao.
Mampitombo ny mitochondria ve ny fifadian-kanina?
Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny fifadian-kanina dia manatsara ny fandrindrana ny mitochondrial amin'ny peroxisome, karazana organelle izay afaka mampitombo ny fitrandrahana asidra matavy, ny fizotran'ny metabolisma fototra.
Inona no fampiharana mampitombo mitochondria?
Fikarohana vaovao iray no nahitana fa ny fampihetseham-batana - ary indrindra ny fiofanana anelanelam-potoana avo lenta amin'ny fanazaran-tena aerobika toy ny bisikileta sy ny fandehanana - dia nahatonga ny sela hanangana proteinina bebe kokoa ho an'ny mitochondria mamokatra angovo sy ireo ribosome manangana proteinina, mampiato tsara ny fahanterana amin'ny haavon'ny sela .
Azonao atao ve ny manamboatra mitochondria simba?
Fantatra fa mba hanoherana ny fahasimbana, ny mitochondria dia manana làlana fanamboarana voafaritra tsara izay mitovy amin'ny an'ny nukle, anisan'izany ny: fanamboarana ny excision base (BER), fanamboarana tsy fitoviana (MMR), ny fanamboarana ny tapaka tokana (SSBR), fanatevenana farany fampiroboroboana ny mikrohomolojia (MMEJ), ary angamba fanatambarana indray ny homolojia.
Inona ny fanampiana manampy ny mitochondria?
Ny famenon-tsakafo voajanahary am-bava misy fosfolipidan'ny membrane, CoQ10, NADH microencapsulated, l-carnitine, asidra lipoic, ary otrikaina hafa dia afaka manampy amin'ny famerenana ny asan'ny mitochondrial ary mampihena ny havizanana tsy azo sitranina amin'ireo marary manana aretina mitaiza.
Ny Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) dia mampiasa.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) noheverina ho vitamina. Na izany aza, ny fikarohana fanampiny dia nametraka azy ho toy ny fitambaran-tsakafo tsy vitamina izay miseho amin'ny sakafo sy ny tavy mampinono. Na izany aza, zava-dehibe ny manasongadina fa na dia tsy nisy fikarohana nanamarina aza ny fifangaroan'ny biby mampinono azy dia manodidina ny 100-400 nanograms PQQ no miforona ao amin'ny vatan'olombelona isan'andro. Mampalahelo fa io vola io dia tsy ampy hanohanana ireo fiasa isan-karazany izay voaporofo fa tanteraky ny PQQ. Noho izany, matetika ny olombelona dia atoro hevitra mba hihinana PQQ amin'ny endrika famenon-tsakafo.
Ny sakafo tsy ampy amin'ny PQQ dia tsy hoe mitarika amin'ny fitomboana ihany fa mampihena ny firaisana ara-nofo. Torak'izany koa, fandalinana maromaro dia nampifandray ny PQQ amin'ny fitomboana sy ny biogenesis mitochondrial. Raha atao teny tsotra, ny vatan'olombelona dia afaka mahazo tombony amin'ny PQQ satria mampiroborobo ny isa sy ny asa mitochondria, ka mahatonga ny haavo angovo tsaratsara kokoa. PQQ dia fantatra ihany koa ho toy ny agence REDOX tena tsara ary manakana ny fanaovana oxidation sy ny polymerization.
Tombony Pyrroloquinoline Quinone (PQQ).
Ny fahalianana amin'i Pyrroloquinoline Quinone dia nitombo be tao anatin'izay taona vitsy lasa izay satria ity tambabe ity dia nifandray tamina tombontsoa maro. Eto isika dia mijery ny tombontsoa lehibe indrindra Pyrroloquinoline Quinone (PQQ).
① Ny PQQ dia nifandray tamin'ny angovo nohatsaraina tamin'ny ankapobeny
Mitochondria dia organeles bitika kely izay misy ao anatin'ny sela ary matetika antsoina hoe cell powerhouse satria mamoaka angovo avy amin'ny sakafo, amin'izay manome ny angovo ilain'ny sela hanao ny asany. Ny Pyrroloquinoline Quinone dia mamela ny mitochondria hiasa tsara kokoa, ka hitombo ny famokarana angovo ao anaty sela. Ity angovo mitombo ao anatin'ny sela ity dia mahita ny làlany mankany amin'ny vatana iray manontolo, avy eo mitarika faharetana bebe kokoa sy angovo ankapobeny. Raha matetika ianao mahatsapa fihenan-tsasatra na angovo kely dia hanampy anao hampiakatra ny haavon'ny angovo anao ny fanampin-tsakafo PQQ. (1) Pubmed: ny vokatry ny Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Manatsara ny singa fitomboan'ny hozatra
Ny Pyrroloquinoline Quinone dia mifandray amin'ny lalan'ny sela ary mandritra ny fizotrany, dia misy vokany tsara eo amin'ny fitomboan'ny hozatra izany. Izy io kosa dia mitarika amin'ny fampivoarana ny sela sy ny nerveur neuronal ao amin'ny vatan'ny kranial. Noho izany, ny PQQ dia matetika mifandray amin'ny fiasan'ny ati-doha. Satria ny tsy fetezan'ny NGF dia mifamatotra matetika amin'ny aretin'i Alzheimer, matetika ny famenon-tsakafo PQQ dia manampy amin'ny fitsaboana ny aretina mifandraika amin'ny taona.
③ Ny fidirana PQQ dia nifamatotra tamin'ny torimaso nohatsaraina
Ny fanadihadiana iray dia nanadihady ny vokatry ny fihinanana PQQ amin'ny torimaso an'ny olona. Ny fanadihadiana dia namakafaka ireo mpandray anjara nandritra ny valo herinandro ary nahita fa ireo izay nandany matetika nandritra ny valo herinandro dia afaka natory tsara kokoa. Ny fanadihadiana dia nanambara ihany koa fa ny fihinanana PQQ dia mampihena ny kortisol, ny hormonina miady saina izay manelingelina ny torimaso ara-dalàna. Na dia fikarohana bebe kokoa aza no ilaina amin'ity faritra manokana ity, ny fikarohana savaranonando dia mampifandray mazava tsara ny fihinanana PQQ sy ny torimaso tsara kokoa.
④ Mampiroborobo ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ny PQQ amin'ny alàlan'ny fampihenana ny adin-tsiranoka
PQQ dia fantatra amin'ny fananana avo anti-oxidant - mampihena ny haavon'ny proteinina C-reactive sy IL-6 ao anaty ny vatana, izay samy tompon'andraikitra amin'ny fivontosana. Ny fananana oxidative koa dia mahatonga ny PQQ mpiady mahomby amin'ny adin-tsaina oxidative, izay antony iraisana amin'ny aretina mitaiza maro, toy ny carcinomas sy ny neurodegenerative aretina. Ny PQQ dia mampihena ny fihenjanana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fahasimban'ny oxidative vokatry ny radika maimaim-poana sy ny fanatsarana ny metabolisma.
⑤ Ny PQQ miaraka amin'ny CoQ10 dia manatsara ny fiasan'ny memoara
Ny fihinanana PQQ dia nampifandraisina tamin'ny fihenan'ny fihenjanana, izay avy eo, dia mitarika fanatsarana ny fiasan-tsaina sy fanatsarana ny fitadidiana. Ny fikarohana fikarohana dia natao mba handinihana ny fiantraikan'ny PQQ amin'ny fahatsiarovana. Ny fanadihadiana natao dia nahatsikaritra fa ny PQQ dia miara-miasa amin'ny CoQ10, coenzyme izay miasa ho toy ny antioksida izay mampitombo ny metabolisma ary miaro ny sela tsy ho simba. PQQ miaraka amin'ny CoQ10 dia naneho ny fanatsarana ny asan'ny fahatsiarovana.
⑥ Tombontsoa hafa amin'ny PQQ
Miverimberina hatrany ny tombontsoa voalaza etsy ambony, PQQ dia manolotra tombony sasany hafa momba ny fikarohana izay anaovana izao. Ohatra, ny fikarohana mialoha dia nanaporofo fa ny fihinanana PQQ dia mitarika ihany koa ny fitomboana.
Aiza no hividianana vovoka Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) amin'ny Bulk?
Raha mpamatsy sakafo ara-pahasalamana voarohirohy amin'ny famokarana Pyrroloquinoline Quinone ianao dia hita fa tsy maintsy mitady mpikaroka mpamatsy akora izay afaka manome vovony PQQ ianao amin'ny ampahany. Ny fitadiavana mpamatsy izay azo atokisana amin'ny kalitao sy ny fahatokisana dia zava-dehibe amin'ny fametrahana orinasa mahomby.
Raha mitady ny mividy Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) vovoka amin'ny ankapobeny, ny toerana tsara indrindra hiantsenana dia ny Cofttek. Cofttek dia orinasa biolojika ara-teknolojia avo lenta izay natsangana tamin'ny taona 2008 ary miasa amin'ny foto-kevitry ny "Basis kalitao, ny mpanjifa voalohany, serivisy marina, tombontsoa iraisana". Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fitsapana tonga lafatra, izay mamela azy io hanome serivisy sy vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifany. Cofttek dia mamatsy ny vokariny any amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody any Chine, Europe, India ary Amerika Avaratra. Ny vovony PQQ nomen'ny orinasa dia tonga amina andiany 25 kilao, izay ampy hamokarana andiam-bokatra marobe amin'ny vokatrao. Ny tena zava-dehibe dia manana ekipa mpitantana efa za-draharaha sy ekipa R&D kilasy voalohany i Cofttek. Azonao antoka, noho izany, fa hahazo ny fanateranao ireo vokatra avo lenta mampino amin'ny fomba mety ianao. Raha mitady hividy Pyrroloquinoline Quinone betsaka ianao dia mifandraisa amin'ny ekipa amin'ny serivisy cofttek.
(1) Pubmed:Ny vokatry ny famenonan'ny Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) amin'ny fampisehoana fanatanjahan-tena aerobika sy ny indentsan'ny biogenesis Mitochondrial amin'ny lehilahy tsy voaofana
(2) Ny vokatry ny neuroprotective ny pyrroloquinoline quinone amin'ny ratra amin'ny ati-doha
(3) Fandrosoana vao haingana momba ny tombony azo avy amin'ny quinone pyrroloquinoline
(4) Ny vokatry ny famonoana Antioxidant Pyrroloquinoline Quinone Disodium sira (BioPQQ ™) amin'ny fiasa kognitive
(6) Fitsangatsanganana ohatra.
(7) Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao.
(8) Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(9) Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(10) Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(11) Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(12) Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(13) Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(14) Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
(15) Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).
Tiako ny pqq. Efa ho 2 taona no nampiasako azy. Ho ahy dia manatsara ny angovo. Tsy amin'ny fomba mampientam-po fa fanamafisana fotsiny amin'ny fikarakarana ara-tsaina sy ny angovo ara-batana. Mampiasa azy io isan'andro 10 na 20 mg w 100mg ubiquinol. Manoro izany aho.
Mihinana 40 mg isan'andro aho. Ny heriko dia tsy miova mandritra ny andro, ary tsapako fa manampy amin'ny kalitaon'ny torimaso lehibe io miaraka amin'ny ashwagandha, magnesium ary l-theanine.
Pyrroloquinoline Quinone dia voatonona tamin'ny fanadihadiana iray momba ny fomba fanasitranana amin'ny fikorianana. Manentana ny biogenesis an'ny mitochondria vaovao izy io ary mifangaro amin'ny CoQ10 ho an'ny fanamboarana sela. Tsikaritro ny fahasamihafana lehibe amin'ny angovo sy ny toe-tsaina indraindray rehefa raisiko izany.